राशिफल / वि.सं. २०७४ माघ २८ गते आइतबार - सफलताका सुत्रहरु
Home/जीवनशैली/राशिफल / वि.सं. २०७४ माघ २८ गते आइतबार
राशिफल / वि.सं. २०७४ माघ २८ गते आइतबार
२८ माघ २०७४, आईतवार १०:४०
नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । पढाइलेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने र व्यापार व्यवसायमा समेत सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ । निराश नहुनुहोस्, केही समय पर्खंदा स्थितिमा सुधार आई अवश्यै उन्नति हुनेछ । आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग गाढा पहेंलो वा केशरी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ धर्मराजाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरताको प्राप्ति हुनेछ । सुरुमा घरपरिवारका सदस्य र साथीभाइसँग मतभिन्नता भएपनि अन्त्यमा उनीहरू सकारात्मक देखिने छन् । बालबच्चाबाट सुखसन्तोष प्राप्त हुनेछ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ । जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारबाट राम्रै आय हुनसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग हलुका रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कामदेवाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने छैन । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ । सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन् । अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्रा हुनसक्छ । भोगविलासमा मन जानेछ । बन्दव्यापारमा समेत सोचेजस्तो लाभ हुँदैन । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल हुँदैन । पारिवारिक जीवन निराशापूर्ण रहने छ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सेतो वा घुर्मैलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ धन्वन्तरीदेवाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ०८ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आफ्नै घरमा चन्द्रमाको उपस्थिति भए पनि समय त्यत्ति भरपर्दो छैन । श्रममूलक काममा निकै खट्नु पर्ने समय छ । व्यवहारिक समस्याले सताउन सक्छ । बन्दव्यापार र पेसा÷व्यवसायमा सफलता नै मिल्ने समय छ । भोगविलास र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च गर्न मन आकर्षित बन्नेछ । नयाँ काम गर्ने सोच पलाउन सक्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । आजका लागि शुभअङ्क १ र शुभरङ्ग गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ अं अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १० पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
मिहिनेत र दौडधूप गरेको काममा सफलता प्राप्त भई छाड्ने छ । अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सकिने छ । बन्दव्यापारका क्षेत्रमा झिनामसिना समस्या देखिन सक्छन् । घरायसी समस्यामा समय व्यतीत हुनसक्छ । कडा मिहिनेत र परिश्रमका कारण गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने सम्भावना छ । मनोरञ्जन वा खेलवाडबाट टाढा रहनु पर्छ । आजका लागि शुभअङ्क २ र शुभरङ्ग कालो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Reddit WhatsApp Viber Print
♥ ♥ पाचँ प्रेमिल भनाइहरू ♥ ♥
सिद्धार्थ बुद्धको प्रेरक कथा, जसले जीवन बदल्न सक्छ
यसरी हुन्छ युरिक एसिड, यी हुन कारण र बच्ने ८ उपाय
१२ पुष २०७४, बुधबार ०८:१८
आउनै लागेको धनलाई रोकेर गरिबी र दुर्भाग्य बढाउने तपाईको यस्ता बानी ! सुधार्नुहोस् आजै
२१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०९:३०
यस्ता छन् जाडोमा माछा सेवनका फाइदाहरु !
७ पुष २०७४, शुक्रबार १५:०१
राशिफल / ०७४ कार्तिक ०४ गते शनिबार
३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार २२:००
राशिफल / २०७४ कार्तिक १४ गते मङ्गलबार
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०६:२५
आँखा फरफरउनु समस्या हो ? यस्तो छ समाधान
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १०:४२
खुसी सम्वन्धी केही महान भनाईहरु
३ बैशाख २०७५, सोमबार २२:४२
शिल्पा विमलीका पाँच लाईन
२९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०८:४५
राशिफल / वि.सं. २०७४ फाल्गुन २४ गते बिहीबार
२४ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०७:२०
उनले तपार्इंलार्इ मन पराउछिन कि पराउदिनन् ? यस्ता छन पत्ता लगाउने १० सुत्र
५ माघ २०७४, शुक्रबार ११:५१